Akụkọ ihe mere eme nke Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.
Nnọọ na Hebei Beimudou Trading Co., Ltd.
Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọkachamara
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd., emi odude ke Shijiazhuang, Hebei Province, bụ ọkachamara mbubata na mbupụ trading ụlọ ọrụ, anyị nwere ọtụtụ afọ experence nke igwe kwụ otu ebe azụmahịa, Anyị mmepụta bases nnyocha na mmepe emmepe dị na Tianjin na Hebei, anyị isi ngwaahịa. gụnyere igwe kwụ otu ebe ugwu, igwe mpịaji, igwe kwụ otu ebe obodo, igwe ụmụaka na igwe kwụ otu ebe.
Ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ ịdị mma nke mba ụwa ma nwee ekele dị ukwuu n'ahịa ahịa dị iche iche n'ụwa niile.
Anyị nwere ike ịnye nhọrọ nke usoro ọkọnọ dị elu, nlekọta nke usoro mmepụta ihe dị elu na njikwa nkọwa nyocha dị elu.Anyị nwere oge nnyefe ngwa ngwa na ọnụahịa asọmpi na ahịa.
√Anyị nwere ọtụtụ ụkpụrụ maka onye na-azụ ahịa họrọ, anyị ga-enwekwa ume na oge oge niile, ụlọ nkwakọba ihe anyị nwere nnukwu igwe kwụ otu ebe, ụbọchị ọ bụla ga-eme ka ọnụọgụ ahụ dị ọhụrụ, ọ ga-azọpụtakwu oge maka ndị na-azụ ahịa ịnata ngwongwo, nnyefe ngwa ngwa na ngwa ngwa. nzaghachi mgbe-ire ahịa bụ àgwà ụlọ ọrụ anyị.
√ Ụlọ ọrụ anyị na-ere nke ọma na-agbasa karịa ógbè na obodo 20 na China ma na-ebuga ya karịa mba 30 na mpaghara dịka USA, Russia, France, Canada, Australia, India na na.
√ Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ndị dabere na ndị ahịa chọrọ. Anyị nwere ike ịnye ọrụ OEM, A na-anabata imewe gị na logo gị.Anyị nwere beimudou ika anyị, anyị ji ezi obi na-achọ ndị ọrụ na mba dị iche iche.
√ Anyị dị njikere iji ezi obi na-akwado ndị China na ndị ahịa mba ọzọ iji mepụta echi ka mma aka na aka.Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ, anyị ga-enwekwa obi ụtọ ịnata akwụkwọ ozi gị.
√ Ụlọ ọrụ anyị dabeere na ụkpụrụ nke "Top àgwà na aha", ndị ahịa ma n'ụlọ na ná mba ọzọ ga-nabata anyị site n'eziokwu na-ekwurịta banyere azụmahịa na ogologo oge imekọ ihe ọnụ ka guzobe a amamiihe ọdịnihu.
Womens Mountain Bike, Ụmụ agbọghọ Balance Bike, Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe 12 inch, Igwe igwe / igwe kwụ otu ebe 20 inch, Nhazi igwe kwụ otu ebe, Pink Balance igwe kwụ otu ebe,